ဘဲသား ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ | Wutyee Food House
« ကူဖီ မလိုင် (Kulfi)
March 21, 2012 by chowutyee
ဘဲသား ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ (၁၀ယောက်စာ)
ဒါကတော့ ဘဲသား ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲလေးပါ။ အရင်က ၀တ်ရည် အဒေါ်ချက်တဲ့ ဘဲသား ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲက အရမ်းကောင်းလို့ နံမည်ကြီးပဲ။ ဒါကြောင့် ခုအဒေါ်ဆီက ချက်နည်းတောင်းပြီ ၀တ်ရည် ကိုယ်တိုင် ချက်ထားတာပါ။ လုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်လည်း သေချာရေးပေးထားပါတယ်။ နွေရာသီ အားလပ်ရက်များ မိသားစုနဲ့တူတူ လုပ်စားနိုင်အောင်ပါ။ ချက်နည်းကို ကြည့်ရအောင်…
ဘဲသား – တခြမ်း (အထဲမှ ကလီစာများကို သန့်စင်ပြီသား)
မှိုခြောက် – ရခု (ရေနွေးဖြင့်ပြုတ် ထားပေးပြီ အရှည်လှီးထားပါ)
ပဲလိပ် – ၅ကျပ်သား (လက်မအရွယ်လေးများ ပိုင်းထားကာ ရေစိမ်ထားပေးပါ)
ပန်းခြောက် – ၅ကျပ်သား (ရေစိမ်ထားပေးပါ)
ကြက်ဥ အကာ – ၃လုံး (ကြက်ဥအနှစ်များကို ဖယ်ပြီ အကာများ ခလောက်ထားပါ)
ကော်မှုန့် – ရ၀ ဂရမ် (ရေဖြင့် ဖျော်ထားပေးပါ)
ပဲငံပြာရည် အကြည် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၅ဇွန်း
ဆား – စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
ကြက်သားမှုန့် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၄ဇွန်း
သကြား – စားပွဲတင်ဇွန်း ၅ဇွန်း
တရုတ်မာဆလာ – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ပုံ၁ပုံ
ငရုတ်ကောင်းမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ပုံ၁ပုံ
ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲနှင့် တွဲဖက်သုံးဆောင်ရန် ပါဝင်ပစ္စည်းများ
ခေါက်ဆွဲ – ၅၀ ကျပ်သား
ကြက်သွန်ဖြူ – ၅ခု (နှုတ်နှုတ်စဉ်းပြီ ကြက်သွန်ဖြူ ဆီချက် လုပ်ထားပေးပါ)
ပဲပင်ပေါက် – ၁၀ကျပ်သား (အမြှီးများ ဖယ်ပြီ ရေနွေးဖျော်ထားပေးပါ)
ကြက်သွန်မြိတ် – ၅စည်း (အရှည်လေးများ လှီးကာ ရေနွေးဖျော်ထားပေးပါ)
ကန်စွန်းရွက် – ၁စည်းတ၀က် (နွင်းပြီ ရေနွေးဖျော်ထားပေးပါ)
ငပိ – လက်တဆုတ်စာ
ပြုလုပ်နည်း ။ ငရုတ်သီးစိမ်း ၆ထောင့်ကို ငပိနှင့် ရောထောင်းပြီ သံပရာသီး (၁လုံး) ညှစ်ထည့်ကာ ရေအနည်းငယ်ဖြင့် ခပ်ပျစ်ပျစ်လေး ခွက်တစ်ခုထဲတွင် ဖျော်ထားပါ။
၁။ အရင်ဆုံး ဘဲသားများကို ရေဖြင့် သန့်စင်အောင် ဆေးပြီ အတုံးကြီးများ တုံးကာ ဆား(စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်)၊ ကြက်သားမှုန့်(စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း) တို့ဖြင့် ရောနုယ်ထားပါ။
၂။ ထို့နောက် ဒယ်အိုးကြီးတစ်ခုထဲ ရေ(၅လီတာ)ထည့်ကာ ပွက်အောင်အထိ တည်ထားပေးပါ။
၃။ ရေဆူလာလျှင် ဘဲသားများကို ထည့်ကာ နူအောင်အထိ အဖုံးအုပ်၍ ၂နာရီခန့် တည်ထားပေးပါ။
၄။ ဘဲသား နူသွားပြီဆိုမှ ဘဲသားများကို ပြန်ဆယ်ကာ အသားနွင်းပေးပါ။
၅။ ပြီနောက် ဘဲပြုတ်ရည်အိုးထဲ ရေနွေး(၁လီတာ) ထပ်ထည့်ကာ ပွက်အောင် ပြန်တည်ထားပါ။
၆။ ဘဲပြုတ်ရည်များ ဆူလာလျှင် အသားနွင်းထားသော ဘဲသား၊ မှိုခြောက်၊ ပဲလိပ်၊ ပန်းခြောက်များကို ရောထည့်မွှေပေးပါ။
ရ။ ထို့နောက် အရသာအတွက် (တရုတ်မဆလာ၊ ပဲငံပြာရည်၊ ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်၊ သကြား၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်) များ ထည့်မွှေလိုက်ပါ။
၈။ အရသာ အနေတော်သွားပြီဆိုလျှင် ဖျော်ထားသော ကော်ရည်များကို ဇွန်းဖြင့် ပြန်မွှေပြီ ဆူနေစဉ်အတွင်း ဖြည်းဖြည်းခြင်း လောင်းထည့်ပါ။
၉။ ဘဲသာကော်ရည် မပျစ်မကျဲ ဆူအောင်တည်ထားပေးပါ။
၁၀။ အရမ်းပွက်ပွက်ဆူလာမှ ခုနက ခနောက်ထားသော ကြက်ဥအကာများကို ဖြည်းဖြည်းခြင်း လောင်းထည့်ကာ မွှေပေးပါ။
မှတ်ချက် ။ ။ ဆူလာမှ ကြက်သာအကာများ ထည့်ပါ၊ မဟုတ်လျှင် ကော်ရည် နောက်သွားပါလိမ့်မည်။
၁၁။ ဘဲသား ကော်ရည်ရပြီဆိုလျှင် သုံးဆောင်ရန် ပြင်ဆင်ပါတော့မည်။
၁၂။ အရင်ဆုံး ဇောက်ခွက်တစ်ခုထဲ တစ်ယောက်စာ ခေါက်ဆွဲဖတ်၊ ရေနွေးဖျော်ထားသော (ကြက်သွန်မြိတ်၊ ပဲပင်ပေါက်၊ ကန်စွန်းရွက်)ထည့်ပေးပါ။
၁၃။ ပြီမှ အပေါ်မှ ဘဲသားကော်ရည်လောင်းထည့်ကာ ငပိ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ဆီချက်တို့ဖြင့် အရသာရှိသော ဘဲသားကော်ရည်ခေါက်ဆွဲကို သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ…
Posted in -မြန်မာ ချက်ပြုတ်နည်းများ | 24 Comments
on March 21, 2012 at 8:21 am | Reply Cho Wut Hmone
yummy yummy wanna eat now heee…look really delicious
on March 21, 2012 at 8:26 am | Reply nandar
ပုံကြည်တာနဲ့ တင် စားချင်စိတ်ပေါက်လာပြီ။
on March 21, 2012 at 3:41 pm | Reply chowutyee
Plz try Ma Nandar!! it is really yummy one! 🙂
on March 21, 2012 at 10:13 am | Reply Min Min
looks really delicious..wanna eat right now!! 😀
on March 21, 2012 at 3:42 pm | Reply chowutyee
Yeah it is! 🙂 Thanks..
on March 21, 2012 at 10:27 am | Reply အန်တီတင့်
ဒီတစ်ခေါက် ဝတ်ရည်လာလည်ရင် လုပ်ကျွေးဘို့း))
on March 21, 2012 at 3:43 pm | Reply chowutyee
၀တ်ရည်က အန်တီတင့်ကိုတောင် အိမ်ဖိတ်ကျွေးမယ်ဆိုပြီ အကြွေးတင်နေတာ။ မချောပြန်လာလည်မှ ဖိတ်လိုက်မယ်နော်.. ကျေးဇူးပါ အန်တီတင့်ရေ.. 🙂
on March 21, 2012 at 1:06 pm | Reply ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)
နောက်တစ်ခေါက် ရန်ကုန်လာရင် သေချာပေါက် ဝတ်ရည်ဆီလာပြီသာမှတ်
အဲဒီခါကျ အများကြီး ကျွေးရမယ်နော်။း)
ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ ကြိုက်တယ်။ စားချင်တယ်
on March 21, 2012 at 3:44 pm | Reply chowutyee
မချောရေ ဒီတစ်ခါ ၇န်ကုန်လာရင် တကယ်ချက်ကျွေးမှာ… ခုတောင် ပါဆယ်နဲ့ပို့ပေးလို့ရရင် ပို့ပေးချင်ပါတယ်. 🙂
on March 21, 2012 at 1:46 pm | Reply မြတ်
ကော်ရည် ခေါက်ဆွဲအရမ်းကြိုက်တယ် ၊ မနက်တိုင်းဈေးထဲမှာဝယ်စားနေကျ အခုတော့ မစားရတာကြာပေါ့ ၊ ၀တ်ရည်ဆီက နှစ်ပွဲစားသွားတယ်နော်၊ ပြန်လာရင် ၀တ်ရည်ဆီလာပြီး ထပ်စားအုံးမယ်၊ အဲဒီအခါကျရင် တကယ်ကျွေးနော် ၊ အခုတော့
I will surely sis! 🙂
on March 21, 2012 at 4:13 pm | Reply ကုကူ
ကော်ရည်ကြိုက်တဲ့ ကုကူနဲ့တော့ အဲမှာ စတွေ့တာပဲ … ဘဲသားမရှိလို့ ကြက်သားနဲ့ပဲ ချက်စားကြည့်တော့မယ် … ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်မရေ ….
on March 28, 2012 at 3:13 pm | Reply chowutyee
ကူကူရေ လုပ်စားကြည့်နော်။ ကြက်သားနဲ့လုပ်စားလည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ ကျေးဇူးနော် 🙂
on March 21, 2012 at 4:33 pm | Reply ခင်ယမုံ
ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲလုပ်နည်းလေးကို အစ်မလိုက်ရှာနေတာ အတော်ပဲ ညီမလေးရေ..
on March 28, 2012 at 3:14 pm | Reply chowutyee
ဟုတ်ကဲ့ မခင်ယမုံ လုပ်စားကြည့်ပါအုန်းနော်။ ၀တ်ရည်လည်း ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ သိပ်ကြိုက်တာ၊ တော်တော် စားကောင်းတယ် မ.. Thanks also 😀
on April 12, 2012 at 7:09 am | Reply khin thandar
Sis …how to cook ငါး ဆန်ပြုတ် ? When I feel not feeling well, I wanna eat this one. Btw share black and pepper crabs recipes and way to cook for me.
on April 12, 2012 at 8:24 am | Reply chowutyee
sis yay ငါးရံ့ ဆန်ပြုတ် လုပ်နည်းလေး ရေးပေးလိုက်မယ်နော်..
၁။ ငါးရံ့(၅ကျပ်သား) ကို အရေခွံဖယ်ပြီ အရိုးမပါအောင် အသားနွင်း၍ ပါးပါးလှီးပါ။
၂။ ထို့နောက် ဆန်(နို့ဆီဘူး တ၀က်)ကို ရေနှစ်ကြိမ်ဆေး ပေးပြီ ရေကို ဆန်(၄ဆ)ထည့်ပေးပါ။
၃။ ဆန်ကိုနူးအောင် တည်ပြီ ဆန်နူးလာမှ ငါးရံ့သားများကို ထည့်ပေးပါ။
၄။ အရသာအတွက် ပဲငံပြာရည်(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း)၊ ဆား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်)၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်(အနည်းငယ်)၊ ကြက်သွန်မြိတ်(အနည်းငယ် ပါးပါးလှီးထားသော) ဖြူးပေးပြီ ကြက်သွန်ကြော်လေးများဖြင့် သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။
on April 13, 2012 at 3:40 am | Reply khin thandar
on April 15, 2012 at 9:10 am | Reply chowutyee
on April 15, 2012 at 4:24 pm | Reply Cathy
ကော်မုန့်က Tapioca Starch ကိုပြောတာဟုတ် , မမ ?
on April 19, 2012 at 1:42 pm | Reply chowutyee
ဟုတ်။ corn flour၊ potato starch လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်.. 🙂
on April 29, 2012 at 4:55 am | Reply baby lay
on May 2, 2012 at 11:12 am | Reply chowutyee
ငပိက အစိမ်းကိုပဲ ထောင်းရမှာပါ.. 😛
on October 21, 2015 at 12:55 pm | Reply punnicha
သံဈေးက ဘဲပေါင်းခေါက်ဆွဲကိုသတိရတယ် လုပ်နည်းသိလား?